बालुवाटारमा प्रमुख चार दलबीच यस्तो सहमति « Surya Khabar
बालुवाटारमा प्रमुख चार दलबीच यस्तो सहमति
काठमाडौं । मधेसी मोर्चा लचिलो नबने पनि ३१ वैशाखका लागि घोषित स्थानिय निर्वाचन गर्नेमा प्रमुख चार दल सहमत भएका छन् ।प्रदेशको सीमा हेरफेरबाहेकका मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ठोस प्रस्ताव तयार गरेर सहमतिको अधिकतम पहल गर्नेमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । त्यस्तो प्रस्तावमा पनि मोर्चा सहमतिमा आउन नचाहेमा निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
मंगलबारको नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा पनि आउने सुनिश्चितताको खोजी गर्ने सहमति गरेका हुन् । प्रदेशको सीमांकनबाहेकका मोर्चाका मागमा सहमतिको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न सत्तारुढ दल र मोर्चा नेता सम्मिलित कार्यदलले अब गृहकार्य गर्नेछ ।
सत्तारुढ र एमालेबीच एकै दिन दुई पटक वार्ता: सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच सोमबार विहान र साझ गरि दुई पटक वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा भएका दुवै वार्तामा मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । विहान ९ वजे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पहिलो वार्र्ता भएको थियो भने साँझ साढे ५ बजेदेखि आठ बजेसम्म अर्को वार्ता भएको थियो ।
३१ वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा शंका छैन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
अनुमानका आधारमा छलफल हुन्न: एमाले अध्यक्ष ओली
संविधानको पहिलो संशोधन गर्दा हामीले आवश्यक छैन नै भनेका थियौँ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेसी, दलित, जनजाति सबैका माग सम्बोधन हुन्छन् भनेर भन्नुभयो । संसद् अवरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभयो । त्यसैले हामीले सहमति जनायौँ ।
त्यसवेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पक्ष मिलेर पारित पनि गर्यौँ‍ । तर, त्यति महत्वपूर्ण काम गर्दा पनि मधेसी मोर्चाले एक शब्दमा धन्यवाद पनि भनेन । आन्दोलन रोकेन । त्यसैले पहिले मोर्चाको कुरा प्रस्ट हुनुपर्यो‍ । के–के कुरा तपाईंहरूसँग भएको छ ? के–के माग हो ? के गर्दा निर्वाचनमा जान्छ ? प्रस्ट थाहा हुनुपयो । त्यसैले अनुमानका आधारमा छलफल गर्नु उचित हुन्न । गृहकार्य गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।